China ahaziri GCK(L) Low Voltage Drawer Switchgear Factory Price-shengte ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya |Shengte
ahaziri GCK(L) Voltage Drawer Switchgear Factory Price-shengte
GCK (L) mgbanaka mmịpụta dị ala bụ nke ụlọ ọrụ nkesa ike (PC) na ebe njikwa moto (MCC).
Ọ dabara maka ndị ọrụ ike dị ka ụlọ ọrụ ọkụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke Ngwuputa dị ka AC 50Hz, voltaji na-arụ ọrụ na 660V, kacha arụ ọrụ ugbu a na sistemụ nkesa 3150A, dị ka ikesa ike, njikwa moto na ntụgharị ọkụ nkesa akụrụngwa.Nkesa na njikwa.
The kabinet etiti na-welded site pụrụ iche ekara ígwè na ezi ike na isiike.
A na-arụpụta rack na oghere ndị na-arị elu dịka modul 20mm si dị.
A na-eji galvanized akụkụ dị n'ime ya, akụkụ ndị dị n'èzí (akwa na mkpọchi ụzọ) bụ phosphated ma fesa ya na ntụ ntụ electrostatic epoxy.
Nhazi nke kabinet feeder PC yiri nke kabinet feeder.Mgbe feeder dị ugbu a bụ 630 A ~ 2000A, enwere ike ịkwado kabinet ọ bụla nwere loops abụọ ma tinye ya na elu na ala.
N'ime ụlọ ọkụ eletrik (PC), akụkụ elu bụ mpaghara ụgbọ ala kwụ ọtọ, na akụkụ ala bụ ọnụ ụlọ nke sekit.Enwere ike ịkwado ihe nkedo sekit na usoro ME nke mba, usoro CW1 na ihe ndị ọzọ.Enwere ike ịkwado ya na ụdị sekit ọ bụla na-emepụta ná mba ọzọ, dị ka nke ụlọ ọrụ ABB na-emepụta, dị ka ndị ahịa'needs.E series, M series circuit breakers nke Schneider na-emepụta, na ndị na-agbaji sekit nwere ọgụgụ isi.
Sistemu ụgbọ ala: Ụgbọ ala nke ụlọ kabinet na-agbaso usoro waya ise nke atọ, otu ụgbọ ala mgbe akara ụgbọ ala kwụ ọtọ bụ 1250 A ma ọ bụ ihe na-erughị, ụgbọ ala abụọ mgbe akara ụgbọ ala mmiri dị ugbu a karịa 1250 A, bọs kwụ ọtọ n'etiti kabinet na kabinet. A na-arụ ya site na ngọngọ njikọ, a na-eji efere galvanized na efere plexiglass transperent mechie ụgbọ ala kwụ ọtọ, yana n'ime ime ka a na-amachi mgbasa nke arc.The na-anọpụ iche ụgbọ ala na-setịpụrụ n'ihu nke kabinet n'elu, na-echebe ụgbọ ala (PE) ka atọrọ na ala nke kabinet, nke ejikọrọ na nkebi osisi na ọnụ ụzọ nke kabinet ahụ, si otú n'ịhụ na continuity nke grounding.
The kabinet na drawer kabinet nke ofu atụmatụ dị ka capacitance ụgwọ na metering nwere otu ọdịdị ọdịdị na otu kehoraizin ụgbọ ala ọnọdụ, si otú a hụ na drawer cabinet na ofu kabinet nwere ike iji n'akụkụ n'akụkụ.
Enwere windo ikuku ventilashị na ala na n'elu nke kabinet mgba ọkụ na-ebelata ọkwa nchebe nke shei.
Ọkwa nchebe nke shei kabinet bụ IP4.
Enyere ogo ọrụ ugboro (Hz) 50
Egotara voltaji arụ ọrụ (V) 380
Voltage mkpuchi mkpuchi akwadoro (V) 660
Ogo kacha arụ ọrụ ugbu a (A) Ogwe bọs kwụ ọtọ 630-4000
Ogwe ụgbọ ala kwụ ọtọ 1600
Kachasị ọkwa dị mkpụmkpụ na-eguzogide ugbu a Ogwe bọs kwụ ọtọ 80kA (uru dị irè) / 1 s
Ogwe ụgbọ ala kwụ ọtọ 50kA (uru dị irè) / 1 s
Oke kacha elu na-eguzogide ugbu a Ogwe bọs kwụ ọtọ 170kA
Ogwe ụgbọ ala kwụ ọtọ 110 kA
Ngwa mgbakwunye isi sekit (A) 200/400/630
Njikọ sekit inyeaka (A) 10
Ugboro ike 1 nkeji (A) 2500
Ike kacha nke moto njikwa (kW) 155
Ọkwa nchebe IP30-40
Ụdị ọrụ Mpaghara, ime ime, akpaka
Nke gara aga: Ọnụ ahịa n'ogbe maka HXGN-12 AC High Voltage Switchgear Fixed Metal mechiri emechi Loop Switchgear-shengte
Osote: Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ GGD AC nkesa kabinet dị ala nkesa-shengte
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ GGD AC Nkesa voltaji dị ala C...